UZuluboy usiza ezinkingeni zocansi - Ilanga News
Home Izindaba UZuluboy usiza ezinkingeni zocansi
UZuluboy usiza ezinkingeni zocansi
Uthe kunemishado echithekayo ngobuthaka bobaba ekameleni
UZULUBOY uthathwe noDJ Tweety kweminye yemihlangano exwayisa amadoda ngokuzinakekela
MCULI wakuleli odumile, obuye ali-ngise emidlalweni kamabonakude,
uMxolisi “Zuluboy” Majozi, usesebenza emtholampilo osiza abesilisa ngezinkinga zabo zasekamelweni.
Leli phephandaba lithole ukuthi uZuluboy usebenza emtholampilo wamadoda, iMan Up Men’s Health Clinic.
UZuluboy uthi okumthathise isinqumo sokuma emculweni agxile kwezempilo, wukuthi uyasiqonda isimo samadoda sokwesaba ukukhuluma ngezinkinga asuke ebhekene nazo.
Utshele leli phephandaba ukuthi miningi imishado esibhidlikile ngenxa yokuthi indoda isuke yesaba ukuphumela obala ngezinkinga ebhekene nazo.
“Okwami wukwenza abantu babone ukuthi kakulona ihlazo ukuhamba izindawo ezizokusiza ukumisa umuzi wakho. Amadoda amaningi agcina egcwele ezindaweni zokujuxuza ngoba esaba ukutshela amakhosikazi awo ukuthi anenkinga,” esho.
UZuluboy uthi uzohambela izindawo ezahlukene uma sekudlule lesi simo esibhekene naso, sokumiswa kwazo zonke izinto ngenxa yokubhi-dlanga kukasomqhele (coronavirus).
Uthi uzohamba eqwashisa abantu ngokuzinakekela ngokwezempilo. Konke lokhu ukwenza ngokubambisana no-Dkt Sifiso Makhanya ongomunye wabanikazi beMan Up.
Uthi bazobe bekhuthaza nabantu ngokusoka.
Lo mculi uthe abantu besifazane banezindawo eziningi ezibasizayo, kodwa abesilisa bazibonela bona uma benezi-nkinga.
Uthi umtholampilo wabo uyakwazi ukukusiza uhlezi ekhaya ngokungena online, uxhumane nodokotela akusize ngenkinga onayo noma akuyalele imishanguzo okumele uyithenge.
Ekhuluma naleli phephandaba uZuluboy, uthi ukhethe ukuma emculweni ngoba izinto kazihambi kahle kulezi zinsuku.
Uthi inhloso yakhe ngokujoyina lo mtholampilo wukuthi akwazi ukulekelela labo abesabayo. Ucele wonke amadoda ukuba asondele kuyena azobika ngezinkinga abhekene nazo.
Ukhuluma ngalolu hlobo nje uZuluboy, eminyakeni embalwa edlule wehlukanisa nomkakhe ngezizathu ezingadalulwanga. Namanje akaka-thandi ukukhuluma ngokuchitheka komshado wakhe.
Previous articleokamaskandi ukhuthazwe usjava ukuqopha eye-hi hop
Next articleIsiteleka samanesi eKZN nge-coronavirus